Nhau - "COVID-19 antigen inokurumidza bvunzo (Colloidal Goridhe)" neJBT vanowana humbowo kubva ku PEI Germany uye kuferefetwa kwevatengesi kunze kwenyika vanobudirira
"COVID-19 antigen inokurumidza bvunzo (Colloidal Goridhe)" neJBT vanowana humbowo kubva ku PEI Germany uye kuferefetwa kwevatengesi kunze kwenyika vanobudirira
01. COVID-19 Antigen Schnelltest (Colloidal Goridhe) yakagadzirwa naJoinstar Biomedical Technology vakawana iko kuvhenekwa kwekuita kubva kuPaul Ehrlich Institute. Pamwe chete naAbbott, Roche, SD, BD, Siemens LumiraDX, nemamwe makambani ane mukurumbira pasi rese, Joinstar Biomedical Technology yakava imwe yevagadziri vashoma veantigen vanotenderwa nePEI mubatch rekutanga pasirese.
"Paul-ehrlich-institut" (PEI) inomiririra sangano reGerman remubatanidzwa wemishonga uye Biomedicine, inoona nezvekurapa yekutsvagisa uye inodzora agency. PEI iri zvakare mukuru wehurumende mvumo yekuzivisa kuFederal Ministry of Health, inoshandira nzvimbo yeiyo vimbiso yemhando yezvigadzirwa zveropa zveWHO uye vitro diagnostic michina. Inotumidzwa zita remutungamiriri wayo wekutanga, immunologist uye mubairo weNobel, Paul Ehrlich.
02. Nezve kukurumidza antigen bvunzo
Sei isu tichida nekukurumidza antigen bvunzo?
Antigen inoreva chinhu chinogona kuburitsa masoja ekudzivirira chirwere, icho chinhu chingakonzera mhinduro yemumuviri. Antigen kuyedzwa kunogona kushandiswa mune yekutanga nhanho yechirwere (mushure mekutanga kwezviratidzo mukati memazuva 1-5 kana kunyangwe panguva yeiyo incubation nguva) kuti uwane mibairo yakanaka. Iyo antigen yekutsvaga nzira inonyanya kukodzera kuongororwa kwenguva-inofungidzirwa kwezviitiko zvekufungidzirwa kwenyaya dzechikuru-coronavirus hutachiona uye inoshanda kwazvo kunzvimbo dzine kuputika kwakanyanya. Zvinoenderana nemamiriro ezvinhu akaomarara uye akaomarara, WHO, FIND nemamwe masangano epasirese arikusimudzira kuona kweAntgengen senzira dzinoshanda.
Kusanganisira UK, France, Slovakia, Slovenia, Georgia, nedzimwe nyika zhinji vatotanga kutenga nekudzidzira Antigen Rapid Test munzvimbo dzakakura dzinoungana vanhu.
COVID-19 Antigen Rapid Bvunzo (Colloidal Goridhe)
nasopharyngeal swab semuenzaniso
Kunzwisisa kwakanyanya & kusarongeka
Ipfupi hwindo nguva, tsvaga zvirwere mukutanga nhanho uye incubation nguva, inobatsira kutanga kuongorora. Kuongororwa kwekutanga kunounza kurapwa kwakanaka.
Inoshanda kune akasiyana mamiriro: akasarudzwa masangano (akadai sezvipatara); kutangazve kwebasa uye chikoro, kuenderera mberi kwekutarisa nyowani mamiriro emoyo, nezvimwe;
Imwe-nhanho nzira, nyore kushandisa, kudzikisa kupotsa kuwanikwa uye kukanganisa kukanganisa kunoonekwa nekukanganisa kushanda;
Ipa yakazara seti reagents uye zvinoshandiswa zvinoshandiswa pakuedza; hapana michina inodiwa;
Kukurumidza kushanda, kunoguma mu 10-15 maminetsi;
Kuchengetedza tembiricha: 2 ~ 30 ℃, hapana chikonzero chekufambisa cheni cheni;
Zvingasarudzwa zvirevo: 25 servings / bhokisi, 1 inoshumira / bhokisi;
Multiple mushandirapamwe modes, kugamuchira OEM / ODM
CE chitupa, kutumira kunze whitelist kwe Ministry of Commerce
Yakanyorwa muEU coronavirus solution yekuyedza mhinduro dhatabhesi, yakanyorwa ne WHO-FIND Innovation Foundation, uye yakapasa iyo yeGerman PEI kuongorora,
Chitupa chekunyoresa cheGerman neItari